Dib u eegisyada Maalgelinta Hore: Khayaanada Mise Sharci? Sidee U Shaqeysaa? - Wareega Hantida
Bogga ugu weyn Dib u eegisyada Maalgelinta Hore: Khayaanada Mise Sharci? Sidee U Shaqeysaa?
isha sawirka: unsplash
Bulshada hadda jirta, baahida loo qabo in la maalgashado ganacsi ayaa kor u kacday maalinba maalinta ka dambaysa. Oo maadaama ay jiraan goobo sharci ah oo lagu maal gashado waxaa sidoo kale jira qaar halkaas u jooga inay kaa saaraan maalgashigaaga adag ee aad kasbatay. Qormadan, waxaan isku dayi lahaa in aan dib u eego qaar ka mid ah goobaha maalgashiga oo kale oo aan kaa caawin doono in aan ku hago oo aan ku bixiyo tafaasiil badan oo aan ka heli karo goobta si aan u ogaado haddii ay tahay mid sharci ah iyo in kale. Goobta xiisaha lihi waa madal maalgashi hore.
Maalgelinta hore waxaa aasaasay 2013 milkiilaha Adam Sharp iyada oo ujeedadu tahay in laga caawiyo akhristayaasha inay helaan fursadaha maalgashi ee ugu yabooha iyo faa'iidada badan ee ka baxsan suuqyada saamiyada.
Asal ahaan waxay diiradda saartaa bilawga iyo cryptocurrencies, bixinta agab waxbarasho iyo sidoo kale talooyin ku saabsan maalgashi gaar ah. Aan dib u fadhiisanno oo aragno waxa dheeraad ah oo aan ka ogaan karno maalgashiga hore.
Waa maxay Maalgelinta Hore?
Sidii hore loo soo sheegay, hadafka maalgelinta Hore waa in la bixiyo agab waxbarasho iyo sidoo kale talooyinka si fiican loo baaray ee ku saabsan maalgashiyada kala duwan ee u dhexeeya bilawga ilaa cryptocurrencies iyada oo aan la gelin suuqa saamiyada.
Maalgelinta hore waxaa iska kaashaday Adam Sharp iyo Andy Gordon iyada oo diiradda ugu weyn ee siinta akhristayaasha hagitaan iyada oo loo marayo booska maalgashiga cusub ee xiisaha leh oo sidoo kale loo yaqaano isu-ururinta sinnaanta.
Adam Sharp waxaa sidoo kale loo yaqaanaa inuu yahay aasaasaha maalgeliyaha heerka koowaad, kaas oo ah adeeg cilmi baaris bille ah kaas oo tilmaamaya bilawga gaarka ah ee ugu wanaagsan ee lagu maalgashado.
Waxa kale oo uu la aasaasay istaraatiijiyadaha hantida crypto adeegyada cilmi-baarista maalgashiga kuwaas oo loogu talagalay maalgashadayaasha la aqoonsan yahay ee ka diiwaangashan goobta. Adam Sharp waa maalgeliyaha firfircoon laftiisa kaas oo in ka badan 80 ka bilaabay faylalkiisa oo keenaya madal khibrad ballaaran, cilmi baaris, iyo nuxur.
Andrew Gordon, oo ah aasaasaha kale ee maalgelinta hore ayaa sidoo kale ka mid ah aasaasaha maalgeliyaha marxaladda koowaad, iyo sidoo kale falanqeeyaha ugu sarreeya ee istaraatiijiyadaha hantida crypto wuxuu leeyahay khibrad ka badan soddon sano oo uu ka faa'iidaysto maalgashiga hore.
Maalgelinta hore waxay sidoo kale leedahay faylalka ay ku jiraan hal-abuurnimada maxkamadda, DSTLD, Brew Dog, Keen Home, iyo Xidhiidhka Scrap.
Mid ka mid ah waxyaabaha dhigay maalgashiga Hore ee ka baxsan goobaha kale ee maalgashiga waa in ay daabacdo wargeysyada dhijitaalka ah kuwaas oo ku siinaya talo farsamo oo ku saabsan samaynta maalgashiga cryptocurrencies ee boqorka cryptocurrencies taas oo ah bitcoin ilaa altcoins sida Ethereum, Binance silsilad smart ka mid ah kuwa kale.
Iyada oo wax yar oo ah khidmadda is-diiwaangelinta ee $ 50 ilaa $ 100 sannadkii, waxaad helaysaa marin aan xadidnayn oo aad u badan oo ah wargeysyo wargelin ah iyo sidoo kale aragti iyo agabyo ku saabsan qaababka falanqaynta ee ku lug leh cryptocurrency iyo sidoo kale bilawga kuwaas oo kaa caawin doona inaad salka ku hayso sida loo sameeyo. xisaabi khataraha iyo abaalgudka iman kara ee la xidhiidha maalgashigaaga.
Sidoo kale, waxaa jira muuqaallo la heli karo oo ku jira mareegaha kuwaas oo ka kooban mawduucyada hanti-abuurka iyo fursadaha maalgashiga. Iyadoo la kaashanayo maalgelinta hore, waxaad ku caawin kartaa inaad taajir noqoto adigoo si fudud u raacaya mabaadi'da lagu sheegay wargaysyadooda macluumaadka leh.
Iyada oo dhammaan macluumaadka kor ku xusan ee ku saabsan Maalgelinta Hore, shaki kuma jiro in madal la hubo in ay u muuqato mid wanaagsan iyo nooc sharci ah.
Sidee buu u shaqeeyaa Maalgelinta Hore?
Akhri: Maxaan Ku Sameeyaa Lacagtayda? 10 Fursado Maalgashi oo Cusub
Waxaa jira dhowr siyaabood oo maalgelinta hore ay u shaqeyso oo ay u siiso adeegyo akhristayaasha iyo macaamiisheeda.
Inta badan waxaa jira laba ikhtiyaar oo ah wargeysyada maalgashiga ee Maalgelinta Hore kuwaas oo kala ah; Maalgeliyaha Heerka Koowaad iyo Maalgeliyaha Bilowga. Hadda aan eegno
Maalgeliyaha Heerka Koowaad
Maalgeliyaha marxaladda koowaad waa warsidaha caadiga ah kaas oo leh qiimaha isdiiwaangelinta ee ku saabsan $49 ee isdiiwaangelinta sannadlaha ah iyo qiimaha $89 ee adeegyada isdiiwaangelinta sannadlaha ah.
Warsidahani waxa uu ka kooban yahay xogo waxana uu ku siinayaa fursad aad ku hesho maal-gashadayaasha hore faylalahooda bilowga ah oo ay la socdaan talooyinka lacagta gaarka ah iyo warbixinaha lacagta todobaadlaha ah.
Waxa kale oo aad heli kartaa waxyaabo badan oo qaab muuqaal ah kuwaas oo bara oo wax ku bara hababka iyo tillaabooyinka sida lacag looga sameeyo maalgashiga cryptocurrency.
Akhri: Kaydka Abaal-marinta Sare ee Khatarta Hooseeya 10 | Maalgashiga Hantida
Maalgashadayaasha bilawga ah
Wargeysyada maalgashiga bilawga ah ayaa ugu horayn loogu talagalay in lagu baro maalgashadayaasha in ka badan aasaaska.
Wargeysku wuxuu siinayaa maalgashadayaasha sida loo aqoonsado shirkadaha ay u badan tahay inay soo saaraan faa'iido badan oo leh awoodda ugu badan ka dib marka la bilaabo bixinta qadaadiicdooda bilowga ah (ICO).
Wargeysyada maal-gashadayaasha bilawga ah ayaa sidoo kale loo yaqaanaa inay siiyaan macluumaad qoto dheer maalgashadayaasha si ay awood ugu yeeshaan inay sameeyaan xulashooyin maalgashi oo sax ah oo ay kasbadaan macaash faa'iido leh.
Faa'iidooyinka iyo khasaarooyinka Maalgelinta Hore
Hadda ganacsi kasta, had iyo jeer waa faa'iido iyo faa'iido darrooyin la xidhiidha mid kasta oo iyaga ka mid ah, maal-gelinta horena waxba kama duwana.
Sida wanaagsan ee maalgelinta hore u muuqan karto oo ay eegi karto waxaa sidoo kale jira faa'iido darrooyin gaar ah oo ku xiran samaynta isticmaalka madal iyo qaybtan maqaalkan, waxaan isku dayi lahaa inaan eego qaar, haddaysan ahayn dhammaan, faa'iidooyinka iyo khasaarooyinka la xidhiidha isticmaalka isticmaalka. ee madal maalgelinta hore.
Waxaa jira dib u eegisyo kala duwan oo ku saabsan sharcinimada maalgelinta hore taasoo ah dhacdo caadi ah maadaama ay khusayso inta badan waraaqaha maalgashiga.
Si kastaba ha ahaatee, fiirinta faa'iidooyinka iyo khasaarooyinka ayaa laga yaabaa inay kaa caawiso inaad doorato mowqifkaaga arrimaha.
Habka diiwaangelinta ama abuurista akoon cusub ee maalgelinta hore waxay u baahan tahay oo kaliya dhowr tillaabo oo fudud kuwaas oo gebi ahaanba bilaash ah oo bixiya waraaqo elektaroonik ah maalin kasta.
Waad ku mahadsan tahay Adam Sharp iyo Andrew Gordon oo khibrad sannado ah u leh adduunka maalgashiga, maaliyadda iyo cryptocurrency, waxaad si fudud u nasan kartaa adigoo og in macluumaadka lagu bixiyo maalgelinta hore ay tahay mid lagu kalsoonaan karo oo lagu kalsoonaan karo.
Maalgelinta hore waxay sidoo kale bixisaa xubnaheeda iyo macaamiisheeda, mabaadi'da iyo shaqada agagaarka iyada oo la xiriirta dhinacyada maalgashiga ee kala duwan. Mabaadiidan iyo talooyinka maalgashigu had iyo jeer waa kuwo si fiican loo habeeyey oo saamayn leh.
Wargeysyada Maalgelinta Hore waxay leeyihiin hab hoos loogu dhigo caqabadaha la xiriira maalgashiga crypto oo ka dhigaya qof cusub inuu tixgeliyo maalgashiga crypto inuu yahay qorshe lacag caddaan ah oo fudud.
Khidmadaha is-diiwaangelinta maaha kuwo raqiis ah gaar ahaan qofka cusub ee hadda galaya booska maalgashiga oo aan runtii samaynin wax madax ah oo ku yaal booska maalgashiga crypto. Sidoo kale ma jirto dammaanad qaad ah inaad ka soo ceshanayso ujradaada isdiiwaangelinta macluumaadka laga helay Maalgelinta Hore.
Maalgelinta Cryptocurrency waa mid kacsan. Waxaa laga yaabaa inaad lumiso lacag aad u badan haddii aad si indho la'aan ah ugu booddo bandwagon-ka maalgashiga crypto oo aad u guurto ku saleysan macluumaadka kaliya ee laga helay maal-gashiga Hore adoon sameynin xoogaa nafsadaada ah.
Maalgelinta hore ma tahay khiyaamo?
Hagaag, xaqiiqadu waxay tahay in ay jiraan dib u eegis aan fiicneyn oo ku saabsan Maalgelinta Hore, sidaas oo kale, ma soo gabagabeyn karo ama si gaar ah uma dhihi karo haddii Maalgelinta Hore ay tahay khiyaano iyo in kale.
Xeeladahooda suuqgeyntu si kastaba ha ahaatee waa xoogaa marin habaabin ah, iyaga oo sheeganaya inay awoodaan inay kaa dhigaan milyaneer iyada oo loo marayo suuqa bitcoin iyo cryptocurrencies.
Tani waa xoogaa xad-dhaaf ah fikradeyda waana khiyaano weyn, laakiin sidoo kale, warshadaha suuq-geynta, waa inaad buunbuuniyaan mararka qaarkood taas oo aadan runtii qalad ku samayn karin qof kasta oo isku dayaya inuu iibiyo ganacsigiisa.
In kasta oo faylalka ay ku jiraan, talooyinka, iyo warbixinnada lacagta ay faa'iido u yeelan karaan xisaabinta khataraha, waa inaad maskaxda ku haysaa in cryptocurrency uu yahay suuq aan degganayn oo leh isbeddello suuqeed oo aan la saadaalin karin mararka qaarkoodna u horseedi kara khasaare maaliyadeed oo weyn.
Akhri: 10 Maalgashiyada Waqtiga Gaaban ee Ugu Fiican
Waa maxay Maalgelinta Hore? Yaa daabacaa?
Maalgelinta Hore waa warqadda e-leg-ka bilaashka ah ee ay daabacday Maalgelinta Hore LLC. Maalgelinta hore waxay ka caawisaa akhriyaasheeda inay helaan fursadaha maalgashiga ee ugu rajada leh ee ka baxsan suuqa saamiyada kaas oo diiradda saaraya laba qaybood oo gaar ah: bilawga gaarka ah iyo cryptocurrencies. Maalgelinta hore waxa ay bixisaa agab waxbarasho iyo talooyin ku saabsan maalgashi gaar ah.
Maalgelinta hore waxaa hogaaminaya Andy Gordon iyo Adam Sharp. Labaduba waxay masuul ka yihiin wargeysyada. Iyaga oo ka faa'ideysanaya khibraddooda dhaqaale iyo ganacsi ee ballaaran si ay u tilmaamaan talooyinka ugu sarreeya ee akhristayaashooda. Inkasta oo wargeysyadu ay bixiyaan aragti faahfaahsan oo ku saabsan suuqyada maaliyadeed, Maalgelinta Hore ma bixiso talo maalgelin maaliyadeed oo shakhsi ah, ma bixiso adeegyo dillaalnimo, ama ma maamusho lacagta.
Sidee ayuu u shaqeeyaa Maalgelinta Hore?
Waxa kaliya oo aad u baahan tahay inaad sameyso waa inaad booqato mareegta maalgelinta hore ee EarlyInvesting.com si aad u hesho macluumaadkii ugu dambeeyay ee suuqyada. Wixii macluumaad dheeraad ah oo qiimo leh, waxaa lagaaga baahan doonaa inaad is-diiwaangeliso si aad u hesho warsidaha bilaashka ah iyo macluumaadka maaliyadeed. Waxa kale oo aad heli doontaa wargeysyo maalinle ah iyo faallooyin ku saabsan bilowga iyo suuqyada cryptocurrency si toos ah iimaylkaaga maalgelinta hore.
Haddii aad waligaa rabto inaad joojiso is-diiwaangelintaada, arrin kastaa waxay ku siinaysaa isku-xidhka "Ka-reebista". Kaliya guji oo magacaaga ayaa isla markaaba laga saarayaa liiskayada isdiiwaangelinta.
Intee jeer ayaan heli doonaa Maalgelinta Hore?
Maalgelinta hore waxa la daabacaa laba jeer todobaadkii.
Maxay bixisaa Maalgelinta Hore?
Inaad xubin ka noqoto oo aad iska diiwaan geliso adeegyada maalgashiga Hore, waxaad heli doontaa bilawga aan la barbar dhigi karin iyo cilmi-baarista maalgashiga cryptocurrency ee gabi ahaanba wax qiimo ah laguma kordhin. Waxa kale oo aad heli kartaa kheyraad badan oo bilaash ah si ay kaaga caawiso in safarkaaga maalgashiga uu noqdo mid sahlan oo xog-ogaal ah.
Sideen ula xiriiri karaa Maalgelinta Hore wixii su'aalo ah?
Si aad ula xidhiidho Maalgelinta Hore, waxaad u baahan doontaa inaad booqato shabakadooda oo aad gujiso badhanka nala soo xidhiidh si aad u hesho iimaylka taageerada iyo habab kale oo ku saabsan sida loo gaadho oo aad su'aalo u waydiiso.
Dhammaadka waxaas oo dhan, waxaa jira faa'iidooyin badan oo laga heli karo ku biirista madal Maalgelinta Hore. Wargeysyadooda cilmi-baarista waxay bixiyaan fikrado badan oo runtii aad waxtar u leh markaad ku jirto adduunka maalgashiga bilowga iyo cryptocurrency.
Si kastaba ha ahaatee, sidii hore loo soo sheegay si dhab ah uma sheegi karo haddii ay tahay goob fadeexad ah iyo in kale, laakiin waxaan ka shakisanahay inay dhab ahaantii tahay. Waxaan rajeynayaa inaad ku riyaaqday akhrintaada oo aad aragti ka heshay adduunka Maalgelinta Hore.
10ka Kaadhadhka amaahda ee Xadka Sare ee ugu Fiican ee 2021
Ma ku isticmaali kartaa Kaararka Hadiyada Visa ee Amazon?
Waa maxay Maalgelinta ESG, sideese u shaqeysaa?
Maamulka Deegaanka, Bulshada, iyo Shirkadaha (ESG) waa imtixaan lagu ogaanayo wada jirka shirkadda ee bulshada iyo deegaanka…